Forbes: kuwedzera kudiki muUbuntu uye kudonhedza mukati Windows 10 | Kubva kuLinux
Forbes: kuwedzera kudiki kweUbuntu uye kuderera kweWindows 10
Microsoft Windows 10 yakave nekuwedzera kwakasimba kwevashandisi mumazuva ayo ekutanga, sevazhinji vashandisi vevashanduri vekare vakamhanyira kukwidziridza kune iyo nyowani vhezheni. Kunyanya avo vanga vachiri kumhanya Windows 7. Saka, Windows 10 yakawana mamwe anoshamisa manhamba emusika. Asi iwo matambudziko ane ekupedzisira anovandudza iwo avakange vainawo uye vachiramba vainawo, haasi kusiya yakanaka kuravira mumuromo wevazhinji vashandisi.
Sekureva kweForbes (iyo yakazoshandisa data rekuverenga kubva kuNetMarketShare), Windows 10 yaona sei munguva pfupi yapfuura anga adonha zvishoma muhuwandu hwevashandisi. Kunyanya, ivo vanonongedza kuti yakabva pa57,34% kuenda pa56,08%. Izvi hazviwanzo, sezvo panga pasina Windows 11 yekururamisa mafambiro evashandisi kuenda kune vhezheni nyowani, sezvo zvaigona kunge zvakaitika neWindows 8.x kana 7 apo gumi rakabuda.
Pamusoro peizvozvo, zvinoita sekunge kugoverwa kweUbuntu kwaona kusimuka. Sekureva kwenhamba dzakaburitswa neForbes, yakabva pa0,27% munaKurume kusvika 1,87% muna Kubvumbi. Kana ichi chiri chokwadi, zvingave zvakadaro kuwedzera kwe599% yeiyo Canonical distro ichienzaniswa nemwedzi wapfuura (tisingataure kuti ikozvino ine vashandisi vanosvika 599% kupfuura iyo yakazara). Kukwira kukuru uko kungadai kwakakurudzirwa neiyo nyowani Ubuntu 20.04 yekuvandudza, pakati pevamwe.
Kune rumwe rutivi, parutivi rweapuroIyo imwe hombe yekushandisa sisitimu maererano nevashandisi ve desktop, zvinoita kunge macOS Catalina ingadai yakaona kuwedzera kwevashandisi muna Kubvumbi futi. Kukura kwenyaya iyi kwaizoreruka kupfuura kweUbuntu, nekuti zvaizoreva kuwedzera kwe4.15% kana zvichienzaniswa naMarch.
Kunyangwe ivo vachiita senge zvishoma kuderera uye kuwedzera maererano ne vashandisi chaivo, Chichiri chinhu chinokatyamadza ... Zvisinei, izvi zvidzidzo zvehuwandu hazvivimbike ne100%, nekuti zvakavakirwa pazvikamu zvinoshanya mukushanyira mawebhusaiti, kuongorora maitiro kwavanobva.
Mamwe mashoko - Netmarketshare
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Forbes: kuwedzera kudiki kweUbuntu uye kuderera kweWindows 10
Iyo yakagadzika vhezheni yeUbuntuDDE 20.04 yakatoburitswa kare
Redis 6.0 yakatoburitswa uye inouya nekuvandudzwa kwakati wandei